Haweenka Soomaaliyeed uma baahna wasiirad ka shaqeysata danaheeda | Hohad News
Hadii aan nahay Haweenka Soomaaliyeed runtii ma helno intaas iyo in u dhaw aad ayaan uga liidanaa ka qeyb galka Siyaasadda dalka, waxaana ugu wacan Bulshadeena Soomaaliyeed oo aamisan in Ragga kale dunida horumarin karaan.
Dalal dhowr ah oo dhaca qaaradaha kala duwan ee Caalamka waxaa hogaanka u haya Dumar, xuuqdooda dumarkana iyaga ayaa si gaar ah u ilaaliya kuna matala hadba heerka uu yahay kursiga ay joogaan sidoo kale waxey ku difaacaan xuquuaha Haweenka.
Annaga hadaan nahay Soomaali waxaan dalka ka heynaa xilal kala duwan sida Xildhibaan, Wasiir iyo jagooyin kale oo magic u yeel ah.
Haweenka Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa oo si weyn uga soo horjeestay Shir ay Waddo Wasiirka Haweenka Deeqa Yaasiin oo Berri ka furmaya magaalada Muqdisho, sababo badan aawadeed.
Shirkaas oo haweenka dalka loogu talagay in looga hadlo aayahooda waxaa ka qeyb galaya dadka qurbo joog ah oo ka kala yimid Yurub iyo America una badan haween iyo dhowr Ragg ah oo aan shaqo ku laheyn arrimaha Haweenka.
Wasiirada waxey iska indho tirtay dhamaan dumarka Soomaaliyeed ee gudaha kuwa ku nool deegaanada maamul goboleedyada iyo magaalada Muqdisho, mana jirto cid berry shirkaas u mataleysa haweenka dalka.
Wasiiradda oo lafteeda qurba joog ah ayaa lagu eedeeyay in ay xaqiraad ulakac ah ku sameysay gabdhihii Soomaaliyeed ee dalka xilliyadii adkaa u soo halgamay oo ay ka doordbiday qurbajoog aan dhaqanka Soomaaliyeed iyo halgankii adkaa ee ay gabdhuhu soo galeen waxba kala socon oo ay shirka baritoole ku casuuntay.
Gudoomiyaha Ururka Haweenka Qaranka Soomaaliyeed Marwo Batuula Shiikh Axmed Gaballe ayaa warbaahinta shalay u sheegtay in wasiiradda Haweenka Deeqa Yaasiin ay tiri “ Guriga Hooyooyinka igu soo wareeji bishiina lacag 5,000 oo doolar ah qaado.
Xubnaha ururka haweenka gobolka ee gobolada dalka oo iyaguna shir jaraaid qabtay ayaa sheegay in maanta kadib aaney wasiir Deeqa u aqoonsanyn Wasiir Haween .
W/Q: Naciima Hassan Gacal